अफ्रिकाका लागि स्मारक दुर्घटना COVID-19 मा बुरुंडीमा उदाउन?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड » अफ्रिकाका लागि स्मारक दुर्घटना COVID-19 मा बुरुंडीमा उदाउन?
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • बुरुन्डी ब्रेकिंग न्यूज • सरकारी समाचार • मानव अधिकार • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
तान्जानियाले भर्खर आफ्नो यात्रा र पर्यटन उद्योग खोलेको छ र छिमेकी बुरुंडीमा चलिरहेको विकासको बारेमा सचेत रहनु पर्छ।
अप्रिलमा अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष कुथबर्ट एनक्यूबले बुरुन्डीलाई अफ्रिकाको सम्मान गर्न र COVID-19 को खतराहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरे।
Weeks हप्ता पछि आज
बुरुन्डीका राष्ट्रपति नुकुरुजा मरिसकेका छन्, सम्भवत COVID-19 मा छन्
उनको आमा: मृत
उनकी श्रीमती र बहिनी: आईसीयू मा
आगमन बुरुंडी राष्ट्रपति: आईसीयूमा
स्पिकर जुन हाल राष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गरिनै पर्छ: आईसीयूमा
स्वर्गीय राष्ट्रपतिकी आमा पनि भर्खरै बित्नुभयो।
गणतन्त्र बुरुन्डी ग्रेट रिफ्ट घाटीमा भूमिहीन देश हो जहाँ अफ्रिकी महान तालहरू र पूर्वी अफ्रिका एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्।
आधिकारिक रिपोर्टका अनुसार बुरुंडीमा कोरोनभाभेरसको १०104 वटा घटना रहेको छ। १ मृत्यु, recovered 1 बरामद ११,75२,28 people व्यक्तिको देशमा केवल २ cases वटा घटनाहरू छन्, तर कति जना जाँचिए? 11,872,554 382२
बुरुंडी विकासोन्मुख देशहरू कसरी देखिन सकिन्छ भन्नेको एक उत्तम उदाहरण हो, र वास्तविकता चौंकाउने हुन सक्छ।
eTurboNews rअप्रिल १० मा ईश्वरले कसरी बुरुंडीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा खबर गरिएको छ, र कसरी भगवान COVID-19 देखि देश रक्षा हुनेछ। यही कारणले गर्दा ढिलो राष्ट्रपतिले संस्था र विद्यालयहरूलाई खुला राख्न अनुमति दिए। सामूहिक जमघटको अनुमति थियो
मेमा जब देशहरूले COVID-१ spread को प्रसार र यसको रोकथाम रोक्न रणनीति बनाइरहेका थिए, बुरुन्डी चुनावमा गए।
अन्तरिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिले चुनेका र उप-राष्ट्रपतिले चुनेका सबैसँग कोबिड १ have हुन्छ जसमा मन्त्रीपरिषद र संसदका सदस्यहरू हुन्छन्।
यदि यो बुरुण्डीका लागि मात्र होइन तर अफ्रिकाको बाँकी भागका लागि मात्र स्मारक हो भने विश्वले यसबाट पाठ सिक्नुपर्दछ। अफ्रीका र विश्वले COVID-19 को लागि सामान्य ज्ञान स्वास्थ्य दिशानिर्देशहरूको पालना गर्नुपर्दछ। धेरै ढिलो हुनु अघि अफ्रिकाले विश्वको बाँकी ठाउँबाट परीक्षणहरू सञ्चालन गर्न सहयोग प्राप्त गर्नुपर्दछ।
यसले कोविड -१ real वास्तविक हो भन्ने तथ्यलाई सुदृढ पार्न जान्छ। पछिल्लो राष्ट्रपति 19 55 बर्षको थियो र कोविड १ to लाई सकारात्मक परीक्षण गरिसकेपछि कार्डियक अरेस्टमा आधिकारिक रूपमा मरे।